Sidee loo yareeyn karaa qiimaha boogaaga boggaaga WordPress - ITS Techschool
Fursadda aan ku helnay dakhliyo mar kasta oo qof uu yiraahdo ama uu su'aashu ka hadlo qiimaha miisaaniyadda, waxaan noqon laheyn tycoons. Taasi waa in la yiraahdo, heshiis weyn ayaa la yiri, ka kooban oo helay macluumaad qaar ka mid ah "bahal" hawleed hawleed oo u muuqda in ay argagixiso hal iyo dhammaan.
Waqtiga xaddiga marka xaddiga xaddigaagu uu kaaga walwalayo
Maxay Sababta U Dhaqsiyeeyeen Qiimaha Maktabadda WordPress?
Hoosudhaca Qodobbada Ku Saabsan Bogga WordPress
Heerka Bounce waa Metric Qanacsanaanta Isticmaalaha
Sicirada Beddelka Wanaagsan
Heerka Aad u Boogsiga ah wuxuu u xun yahay WordPress
Hoos u dhigista qiimaha boogaaga boggaaga WordPress
Kobcinta xawaaraha ee boggaaga WordPress
Kobcin Naqshadeynta Shabakadda WordPress
Horumarinta Macluumaadkaaga si Loo Hago Qiyaasta Xadka
Kobcintaada SEO iyo PPC Advertising
Heerka Bounce iyo Xiriirka
Xalalka khaladka lagu xalliyo
Ku dar Dhibaatooyinka la xiriira
Si kastaba ha ahaatee, taasi waxay u egtahay in ay ka muuqato xaqiiqda ah in dad badan oo isdaba-joog ah oo qulqulaya markii xaddiga sarreeya loo cayimay sida caadiga ah ma haystaan ​​fikrada fog ee ku saabsan wax ku saabsan boodh aad u culus, ama waxaa laga yaabaa in wax kasta oo kale ee waxqabadyada kale ee la xiriira . Ku fiicnaanshaha nadiifka ku nool webka. Waa wax la yaab leh sida ay uga xun tahay.
Halkaan waxaa ka muuqda xaqiiqda dhabta ah: Sicirka bounce wuxuu astaan ​​u yahay heerka shakhsiyaadka ka tagaya goobtaada adiga oo aan dib u eegin bogga aan ahayn bogga hore. Wax badan oo la yaab leh? Waa inaan kor u qaadnaa daboolka qarsoodiga ah ee xayawaankan loogu yeeray heerkii ugu dambeeyey.
Sidee ayaan u aqbalnaa qaar ka mid ah rajada la isku halleynayo oo raadinaya "khabiir ku dhisan WordPress" ee Google, iyo goobtaada ka soo baxday tobanka hore (10) waxay ku salaysan tahay asalka dhabta ah ee aad si goan u qaadatay ka dib qaababka ugu fiican ee SEO-ga ah. Tan iyo markii aad uxiiso ah "Sida loo Doorto WordPress Consultant Perfect" joogaa waxay u muuqdaan wax aan caadi aheyn oo ku saabsan sawiraadda meta aad Google, waxay u socdaan goobtaada. Gelitaanka blogka ee gaar ah wuxuu kuugu beddelayaa boggaaga marinka, ama "qaybta" kaliya.
Si kastaba ha noqotee, marka ay aadaan goobtaada, waxay si deg deg ah u ogaanayaan inaadan ahayn waxa ay filayaan, markaa waxay ku dhufteen gadaasha qabashada, kala soocaan URL kale ama waxay kumbuyuutarkooda ku deynayaan daaqada. Dhaqdhaqaaqa fudud ee ka baxaya bogga marinka iyada oo aan isku xirneyn wax kasta oo ka haray boggaaga waxaa loo yaqaana cirib.
Markaad la socoto wakhti yar ka dib, ka dibna ka dib markaad ka dhigto tirada guud ee shakhsiyaadka ku soo galay goobtaada, waxaad heleysaa saamiga. Samee turjumaad ku saabsan saamiga qiimaha oo aad leedahay heer aad u kacsan.
Ogolaansho yar oo xisaab ah ku qoynaya. Halkan waa tusaalayn kufilan si ay si wax ku ool ah u muujiso fikradda, Ku-tiri qadarkaaga ku-xigeenkaaga WordPress-ga waxaad heshay martida 1,000, iyo 750 hadhay si dhakhso ah dib-u-eegista boostada, heerkaaga xiga waa inuu noqdaa:
750 / 1000 = 0.75 = 75%; Heerka Bounce = Faa'iidooyinka / Wadarta dadka soo booqda x 100%
Waqtiga xaddiga marka xaddigaaga xaraashkaagu uu kaaga walwalayo
Maaddaama aan hayno "waxa" ka baxsan waddada la garaaco, markaad ka feejignaato xaddigaaga xijiga? Iyadoo aan sameynayo wareegyada aan caadiga ahahay, waxaan ku soo wareegay cajalad muuqaal ah oo ay sameeyeen Neil Patel oo ku dhex jira bartilmaameedyada bartilmaameedka ah ee heerarka qumman. Dhammaystirka dufcaddu waa joornaalada websaydhka leh heerka sare ee xaddiga sida 98%, ayaa ku garaacday bogagga salaanta ee 70 - 90% iyo xuduudaha degaanka 40 - 60%. Xeryaha hogaaminaya ee 30 - waa kala badh, lakulmay degaannada tafaariiqda ah ee 20 - 40% waxayna ku hareeraysan yihiin xarumaha maamulka ee 10 - 30%.
By iyo ballaadhan, waa inaad ku nuuxnuuxsataa haddii heerka WordPress ee ka kacsani ka weyn yahay 60%. Hoosta kala badh waa weyn, hase yeeshee marka aad dhacdo in aad dhali karto 10%, waxaad tahay mid cajiib ah. Iskuday inaadan dhidid aragti si kastaba ha ahaatee, waa inaad ku qiyaastaa (ama aad ka fekerto) heerka aad u kacday ee ka soo horjeeda bandhigyadaada.
Tusaale ahaan, fursadda aad horey u diiwaangelisay heerka xaddiga 95%, ka dibna waxay hoos u dhigtay 65 boqolkiiba marka la eego tallaabooyinka dib u soo celinta, tusaale ahaan, kuwa aan maanta qadeyn doonno, waa inaad ku dhufatid xabada waayo taasi waa isbedel aan la aqbali karin, inkastoo xaqiiqda ah in ay ka weyn tahay 60%.
Dhanka kale, waa in aad xasuusnaataa in ay jiraan hubo noocyo WordPress ah, iyo xitaa walax, taas oo ku yeelan doonta heerar sare oo xawaare ah sida arrin dabcan. Muujin wanaagsan ayaa ah bogga kaliya ee bogga WordPress ah. Xaalad walax ah oo leh heerar sare oo fuushan waa bogga mahadcelinta ee aan u sheegin bogga kale. Goobaha, tusaale ahaan, tixraacyada ereyada internetka ayaa sidoo kale laga yaabaa inay leeyihiin heerar sare oo xawaare ah, maaddaama macaamiisha sida caadiga ah aysan riixin bogga ay ku jiraan qeexidda ay raadinayaan.
Xusuuso mid kasta oo ka mid ah arimahaan markaad go'aan ka gaarto heerka aad u kacday. Si kastaba ha noqotee, dhammaan sababaha iyo ujeedada, 60% waa heerkayaga xiitaa naga soocaya. Intaas waxa dheer, waxaad ku jirtaa aagga halista ah. 40 - 60% waxaad ka badbaaday, 10 - 40% waxaad samaynaysaa ganaax, iyo <10%, waxaad u qalantaa qurxinta.
Waxaan si wax ku ool ah u xaqiijinay waxa iyo goorta. Si kastaba ha noqotee, maxaad u fiicnaan laheyd inaad isku daydo inaad isku daydo qaadashada tallaalka heerkulka sare ee aadka u badan? Waa maxay sababta lagama maarmaan u ah in la sii wado heerarka hooseeya ee soo noqnoqodka hooseeya? Anigu waxaan noqon doonaa mid deg deg ah, sidaa darteed waxaanu u heli karnaa qorshaha ilaa hadda.
Muuji goob ijaar leh oo aad u kacsan, waxaanan ku tusi doonaa goobta aad la leedahay macaamiisha niyadjabsan. Marka laga reebo luuqad hal bog ah, tixraacyada erayada internetka, Million Dollar Homepage et al, goob kasta oo leh heer sare oo sare u kac ah ayaa la mid ah macmiilka saboolka ah.
Marka fursada laga yaabo in heerka sare u kacaa uu yahay mid aad u hooseeya, waxaad wax u qabataa wax sax ah, waana inaad ku guuleysataa qadar badan oo ah waxa aad sameyneyso. Haddii ay dhacdo in ay aad u sarreyso, waa inaad gurigaaga ku soo wadaagtaa dhammaan sababaha keenay in macaamiishu si fiican u shaqeeyaan sida cutub aan la kala qeybin karin leh ...
Marka la eego waxaad ka dhigi doontaa faa'iido leh boggaaga WordPress, waxaad u baahan tahay inaad bedesho martida aan muhiimka ahayn ee ku xeel-dheerayaasha, macaamiisha, ama macaamiisha daacadnimada ah. Waxaad yeelan doontaa wakhti dhib badan oo tan lagu fulinayo haddii qofku aanu ku dhajin si uu u eego wax kasta oo ku yaal boggaaga. Haddii ay dhacdo in dhammaan shakhsiyaadka ay ku sameeyaan boggaga soo bandhigida ay ka soo baxayaan, waxaad si rasmi ah u lumisay dagaalka.
Waxaad ubaahaneysaa rajadaada inaad ku xirto isku xirnaansho iyo soo jeedin si aad tallaabo u qaadato haddii ay tahay inaad bixiso biilasha. Heerka cirifka hooseeya waa hubaal in shakhsiyaadka saxeexa aysan ka tagin goobtaada isla markaaba ay yimaadaan. Ka soo horjeeda ayaa joogto ah.
Ogsoonow: Waxaa laga yaabaa inaad haysatid heer sare oo sare u kac ah iyo heerarka isbeddelka ee aan caadi ahayn.
Dacwad hufan ayaa ah bogga keliya ee bogga WordPress ah oo codsanaya in rajada laga yaabo inaad ku soo wacdo. Haddii ay dhacdo in shakhsiyaadka 1000 ay bogga soo galaan, 800 ayaa kuugu yeeray, waxaad kudhexeysaa 80% xaddiga isbedelka iyadoon loo eegin suurtagalnimada in heerkaaga xiga uu yahay 100%.
Xaalad kale: Aynu sheegno inaad weli u dirin sheygaaga, iyo dhamaadka boggaaga soo bandhigida, waxaad ku dareysaa isku xirnaanta diiwaankaaga shabakada bulshada ee ku saleysan shabakadda si aad u korodho koox. Waxa laga yaabaa inaad ku daboosho koritaankaaga kooxdeeda iyadoon loo eegin suurtagalnimada in goobtaada ay ku biireyso heerka sare ee kacsiga.
Noqo, haddiiba ay dhici karto, haddii CTA-duaga ay ka mid tahay in aad ka faa'iidaysato bog kale oo ku yaal boggaaga (sida codsi ama qaab heshiis ah), ma yeelan kartid isbeddel sare oo leh heer sare oo aad u kacsan. Labada qofba iskuma tagi karaan - dabka iyo biyaha.
Wixii macquul ah ee uu macmiilku kaashanayo boggaaga mid ka mid ah siyaabaha aad ujecel, waxaad leedahay isbedel. Fursadda ay ka baxaan iyaga oo aan iskaashi la sameeyn wax kasta oo ka haray boggaga kuxiran, waxaad yeelan doontaa heer sare oo aad u kacsan. Ka sii gudubka ...
BAM! Waa kuwan waa in la ogaadaa inay ku filan tahay in la ogaado. Waa maxay? Shakhsiyaadka waxay ka tegi doonaan wax kasta oo ay qabanayaan iyo diirada saaraan marka aad sheegto SEO. Taasi waxay ku fadhidaa, si fiican, iyada oo aan dhaqdhaqaaq "bilaash ah" laga bilaabo guurguurayaasha webka, maxay yihiin sicirada isbedelka iyo ka qayb qaadashada macaamilka?
Oggolaanshaha, waxaad si fudud uga heli kartaa dhaqdhaqaaqa ilo kala duwan, si kastaba ha ahaatee, haddii aadan kufilanayn SEO, waxaad dareemeysaa in lumay ganacsigeenna weyn. Waxaad dhab ahaantii ka baxaysaa miiska.
Waa maxay sababta sidaas? Ugu horreyntii, ururada internetka intooda badani waxay helayaan burqad aad u weyn oo ka soo jeeda jaantusyada websaydhka. Dhab ahaantii, waxaad doorbidi laheyd inaadan ilaawin. Ka sokow, dadka guud ee raadinaya qorshe ayadoo la adeegsanayo qalabka raadinta shabakada waa kuwa iibsashada ugu kalsoon. Sidaa darteed, shaki kuma jiro, SEO waa wax muhiim ah. Intaa waxaa dheer, dhalinta heerarka sare ee xayiraadda ma aha habka aad adigu dhiseyso profile SEO ah.
Tani waa qaabka uu Google cayayaanka u yahay tarjumaadda heerarka sare ee soo noqoshada: Dadku waxay ka tagayaan goobtaada si deg-deg ah waxay u yimaadaan iftiinka xaqiiqda ah inaad tahay mid aan muhiim ahayn. Ma siin kartid qadarin, sidaa darteed maahan mudnaanta dejinta SEO. Wax walba oo la tixgeliyo, boggaaga WordPress waxaa lagu riixaa dhabarka, iyo mucaaradkaagu waxay qaataan booskaaga, iyo dhaqdhaqaaqa. Heerka sare u kacda waa mid aad u xun.
Waxaan leenahay hannaanka hordhaca ah. Waqtigan xaadirka ah waa in aan sameyno dhumuc. Waqti ma'ahaan, waxaad isku dayi doontaa in heerka sare u kacda ee ka baxsan dariiqaaga si aad u hesho guuleysi online ah. Ka hor intaanan tagin, waxaan kugu dhiirigelineynaa inaad si dhaqso ah u fuliso talooyinkan, adigoo si fudud u akhri. Waa shaqo fudud, tan iyo markii aan ku qanacsanayno ganacsigaaga WordPress, waa inaad haysataa waqtiyo wanaagsan markaad ku jirto. Isla markiiba, halkan ayaan tagnaa ...
[Raadinta gaadiidkayaga] wuxuu ina siinayaa xuduudaha muhiimka ah ee aqoonta ah ee kor u qaadaya horumarka alaabtayada codsigeena iyo macaamiisheena. Waxay ina tusinaysaa sida ay tahay shakhsiyaadka isticmaalaya alaabtayada marxalad kasta. - Jeffrey Fluhr, CEO SpreeCast
Taasi waa gaaban iyo dheerba? Sidee ayaad u socotaa inaad hoos u dhigto heerarka kacsigaaga boggaaga WordPress oo ku yaala fursadda aanad garanaynin meesha ay arrintu khusayso? Cilmi-yari yar ayaa kaa fogaan doonta inaad ka caawiso inaad si sax ah u sameysato sababta aad ujirto heerarka xayiraadda garaafka.
Waxaa laga yaabaa in aad ka soo jiidato kuwa kufsaday ee Shiinaha, si kastaba ha noqotee ereyadaada iyo walxahaaga ayaa la macno u noqonaya kuwa kufilan Maraykanka. Waxaa laga yaabaa in danahaagu aysan isku duwin kuwa kaa soo horjeeda. Miyuu aad ujoogaa sareeya oo lagu aqoonsaday martida cusub ama soo noqodka ah? Waxaa laga yaabaa inay tahay wax cusub; mareegtadaada neceb macaamiisha la qaadi karo.
Waxay noqon kartaa wax kasta. Qiyaasta aad u kacsani waxay noqon kartaa mid ugu yaraan hal qaybood, laakiin si kastaba ha ahaatee ma ogaan kartid haddii aad xoogga saarto hawshaada. Taas awgeed, waxaad u baahan tahay qalab baaritaan, tusaale ahaan, Google Analytics, Piwik, Crazy Egg, Clicky, iyo Web Trends oo kaliya in la yiraahdo lamaane.
Ka fikir waxkasta oo ka socda dhaqaalaha dhaqaalaha ilaa aagga dhulka, habdhaqanka macmiilaha, iyo marti-geleyaasha martida ayaa isticmaala cabirooyin kala duwan. Baaritaan kasta oo suurtagal ah ee safarkan - waa in aad leedahay fikrado ku saabsan waxqabadkaaga farahaaga. Taasi waa sheyga waxbarashadayda kiimikada ee loo isticmaalo inoo ogeysiiyo - waxyaabahan ka saar farahaaga, ama aad guriga u tagto kana dooro polytechnik. Haha, xaalado waaweyn oo weyn.
Wakhti daqiiqo ah, sida aynu u ciyaarno oo aynu u ciyaarno sidan oo kale ee aan u jecelnahay jacaylka oo dhan. U feker inaad raadineyso gaadhiga ugu dambeeya Audi. Muraayad mugdi ah Audi A4 si sax ah. Fikradda la mid ah natiijada asaasiga ah ee Google maahan goobta goobta dhabta ah ee Audi, tan iyo markii ilmuhu si degdeg ah u dhaqso badan yahay.
Waxaad si dhab ah ugu riixday inaad kaxeyso xayawaankaas baabuurkaaga wakhti xaadirkan hal mar todobaadkii. Marka aad tagto Google, raadso Audi A4, iyo fursada ku saabsan "Newcars15.com" oo ku saabsan farsamo "cascade" kaasoo qaadanaya waqti dheer oo aan wakhti lahayn, iyo hareeraha hareeraha caalamka oo dhan. Miyaad ku jiri kartaa hareeraha ama kharashkaada $ 30,000 ee meel kale ku jirtaa? Waan ogahay inaanan qabsan doonin, marka la eego xaqiiqda ah in goobaha qunyar socodka ah ay dhab ahaantii kaa saari karaan noloshaada.
Fiiri mid kasta oo ka mid ah daqiiqadaha qiimaha leh ee aad ku dhuumato. Maxaa badan, balanqaadkee waxaa jira waxaad ka heli doontaa Audi A4 hal toddobaad laga bilaabo hadda cusub newCars15.com haddii goobta ay weligeed si joogto ah u qaadato? Oggolow, waxaan u qaadan karaa mid aad u fog, laakiin taasi waxay ku salaysan tahay in aan maskaxda ku hayo in aad hesho dhibta, taas oo ay xaaladeenu tahay: Goobta dhexdhexaadku waxay u horseedi doontaa rajo gaabis ah in ay gadaal u soo qabato wax ka degdeg badan marka ay arkaan waxa aad 'dib u soo saar. Waxaan arintaan si weyn uga dhignay sida loo yareeyo wakhtigaaga WordPress ee wakhtigaaga, sidaas darteed ma dhihin doono qodobada xiisaha leh.
Waxaan cunuggaan ku haysannaa qalabka shanaad ee hadda, waana aynaan wali ku dhufanin jidka weyn. Waddada bogga WordPress, sidee ayay ujirta hoos u dhac ku yimaada? Waa asaasi; habka jidka weyn ee waddada ayaa u egtahay hagaha (ama boostada calaamadda) oo hagaya macaamiisha adigoo u maraya goobtaada.
Maryan Jane waxay gasho Google si ay u hesho maaddo badan oo leh jawaabo badan oo ku saabsan ganacsiga ku salaysan WordPress. Marka laga eego tirada badan ee dadaalka ah waxaad ku gelisay samaynta qoraalka buuq aad u wanaagsan, "20 Best Responsive WordPress Mawduucyada 2015" ayaa muuqata marka hore Google, waxayna u socotaa.
Waxay u malaynaysaa in boostada oo dhan, oo ka mid ah farsamoyaqaanku doorto inuu eego boggaaga mawduuca WordPress-ka ah ee ay ka faa'iideysan karto xudduntaada, dariiqa lugta ama lugaha. Iyadoo aan loo eegin suurtagalnimada in aysan iibsan doonin mid ka mid ah mawduucaaga, ma tixgelin doonto xayiraad.
Waqtigan xaadirka ah ayaa iska fogeynaya Mary Jane. Ka feker John Doe oo si sahlan u soo ogaaday goobtaada (iyada oo loo eego mid kastoo loola jeedo) wuxuuna u baahan yahay inuu helo xogta qaar. Sidee u fududahay John Doe si aad u ogaato waxyaabaha ku jira boggaaga iyada oo loo marayo habka aad u socoto? Miyaad u maleyneysaa inuu ku dhajin doono munaasabaddiisa oo uusan ogaan karin waxa uu raadinayo?
Habka ugu fiican ee habka wadada waa wax kasta laakiin way adag tahay in la isticmaalo. Waa aasaas iyo cad, taas oo iga caawisa inaan xusuusto hal mar markii aan raadinayay layliyada jamacadda Java. Sidaas awgeed waxaan ka helay meeshan ixtiraam leh iyada oo ah hay'ad sharci ah (magac la'aan ma jirin, aan lahayn jajabin).
Goobta waxay eegtey mawduuc aan caadi ahayn - aqoon iyo karti leh. Waxaan ka doodayaa nooca goobta aad ku kalsoonaan karto si aad u dooratid sida faham leh. Si kastaba ha ahaatee, taasi waxay ahayd ka hor intaanan joojin jimicsiga jimicsiga barnaamijka Java ee lacag la'aanta ah oo laga yaabo in ay fahmaan fahamka, aad ogtahay, iiga mid ah.
Sheekada dheer, tababarka tababarka waxaa la jajabiyey heerar dhowr ah oo ku yaala munaasabad weyn, waxaanan qaatay waqti badan intii loo baahnaa sababtoo ah waxaan ahay qof weyn oo bukaan ah, waxaanan ku rajo weynahay in aan helo jaamacad sharci ah jimicsi Si kastaba ha ahaatee, waxaan dareemay cabsi ah oo ku saabsan qashin-qaadista hoos-u-dhigista si aad u hesho koorso keli ah, taas oo aan sameynin darajo ku saabsan rabitaanadayda oo dhan wax kasta oo la tixgeliyo. Meh. Dhamaadka tirade.
Qofka dhabta ah ee awoodda badani ma heli doono tamar ku filan oo lagu eegayo wadadaada oo dhan si aad u hesho qaar ka mid ah hantida ay dhab ahaantii u baahan yihiin. Samee shey kasta oo muhiim ah si aad u sahlan si aad u ogaato habka aad u socoto wadadaada, iyo heerarka qaxarkaagu shaki kaaga jiro. Miyaan kuu jebinayaa adiga? Waa kuwan soo socda:
Samee toos ah oo toos ah, wadada toosan
Cuntubyada sare waxay u muuqdaan kuwo aan caadi ahayn, si kastaba ha ahaatee dhab ahaantii ma u baahan tahay?
Ku dar khariidadda bogagaaga boggaaga WordPress. Waxaad isticmaali kartaa qaybaha, tusaale ahaan, Google Xaqiijinta XML ama waxaad isticmaashaa mawduuc hoos udhigaya bogagyada
Ku dar miiska wadooyinka si aad madaxaaga, cagahaaga iyo dhinaca lugta
Ku dar fasalada, faylasha iyo calaamadaha dhinaca dhinacyada
Ku dar sanduuqa raadinta adigoo ah qalab badbaado leh waa in aad hoostaada hoos u dhigto. Sanduuqa baaritaanku wuxuu sidoo kale sii wanaajin karaa habka aad u socoto iyo macaamilka. Isticmaal module, tusaale ahaan, Iskuduwaha si loo soo saaro raadiye internet oo aad u culus oo si sax ah u raadinaya boggaaga WordPress
Markaad tagto xarunta wax iibsiga, ma waxaad isku dayaysaa waqtigaada dukaamada kuwaas oo bixiya faqri ama ciriiri xun? Waxaan kugula talinaynaa inaadan sameynin, haddii aad tahay qof ganacsade ah oo ka mid ah dukaankaas, taas oo shaki ka dhigi laheyd.
Maaddooyinka saboolka ah waxay kuu soo diri doonaan kuwa kaa saaran xawaare ka sii badan intii aad qaadan kartid. Ma ogtahay, ma waxaad dhihi doontaa waxaad awoodi doontaa inaad maal gashato tamar qiimo leh maadada saboolka ah marka ay jiraan noocyo kala duwan oo xiiso leh oo ku saabsan webka? Waad ogtahay, sida Cheezburger, cajaladaha cajaladaha cajiibka leh ee YouTube, iyo kuwa kale. Maxaa ka kooban walxaha saboolka ah?
Walax walxaha - Fadlan ku haayo walaxdaada dib loo cusbooneysiiyey
Qoraallo aan ku haboonayn oo lagu qiyaasay sawirada - Hal sawir oo ka mid ah waa 660px ballaaran, kuwan soo socda waa 350px
Nuqul ka koobnaanta - Sawirada oo ay ku jiraan. Warbaahinta ujirta macaamiisha, waligoodna ma soo koobin walax. Waa sharci darro.
Beddel iyo kala-beddel maaddadaada sababaha ah in gelitaanka blogka lagu soo galo noocyo kala duwan oo indho-indhaynaya oo aan kala sooc lahayn aan si fudud loo aqoon
Sidoo kale, iskuday inaad sare u qaaddo sharraxaadda macquulka ah ee bloggaaga. Waxyaabaha laysku halleyn karo waxay ku boorinayaan shakhsiyaadka inay u socdaan bogag isku xidhan
Sidee? U isticmaalka:
Madaxda iyo cinwaanada hoose
Noocyada qoraalka waaweyn
Farqiga aan kala sooca lahayn ee indhaha ka fekeraya indhaha (ku xir qorshaha laba-saddex shilin)
Meelo badan oo cadaan ah
Sawirro aan caadi ahayn
Waxyaabaha warbaahinta aan caadi ahayn
Iyadoo samaynta qoraallada blog-kaaga, ku dar qeybaha iyo calaamadaha, sidaas darteed kuwa kufilmaamku waxay ogaan karaan dhibcooyinka laxiriira ee dheeraad ah. Maskaxda ku hay in aad blogkaaga dib u cusbooneysiiso maaddada ugu dambeysa tan iyo markii ay xoojisay macaamiisha iyo SEO.
Intaa waxaa dheer, qeex diyaargarowgaaga dantaada ee bilowga si aad u xaqiijiso in aad diiradda saareyso ururinta saxda ah ee shakhsiyaadka. Hase yeeshe, indhahagaaga ayaa si ballaadhan u dhigi doona, waxaad ku imaan doontaa gaaban oo aad ku dhufatid heerarka soohdimaha.
Dhamaan hawlaha la qabadsiiyo ee ka jaray qiimaha sare ee boggaaga WordPress ayaa wax u dhimi doona wax aan ka ahayn fursadda aad ujirta in aad diiradda saarayso ururinta khaldan ee dadka kiis kasta. Haddii aan si dhaqso ah u dhacay inaan la wadaagno sheekooyinka ku saabsan meesha aan koray, Meru, Kenya, waxaan isticmaali lahaa istaraatiijiyado SEO ah oo u dhow oo aan heli karo si aan u damaanad-qaadin inaanan ku jiidin kuwa kufilmaamaya ee raadinaya Mt. Tusaale ahaan Meru ee Tansaaniya. Astaanta Waxaan jeclaan lahaa inaanan soo xaadirin dadka kufilmaamaya raadinta cashuurta Meru ee India ama macaamiisha raadinaya Meru Networks oo ku yaala Tampa, FL.
Fursadda aan ka baxo qof walba marka laga reebo dadka guud ee raba kuwa ugu roon meeshii aan koray, boggayaga WordPress wuxuu isku qori doonaa qiimaha sare ee boogaha - oo dhan tan iyo intii aan diiradda saarayay dhagaystayaasha (kuwa) qaldan.
Isla waa isku macaamilka dadaalka horumarinta PPC. Marka aad fursad u heshid inaad diiradda saarto, waxaad bixin doontaa wax walba oo ka baxsan dhaqdhaqaaqa aad u baahan tahay. Baaritaankaaga SEO iyo PPC waa in lagu hagaajiyaa baaritaanka garsoorka. Isticmaal waxyaallaha keydsiga ee ku saabsan qalabyada, tusaale ahaan, Google AdWords Keyword Planner, Word Tracker, Taleefannada Yoast iyo KWFinder.com iyo kuwa kale.
Isku day in aadan dhidin qodobbada xiisaha, si kastaba ha ahaatee, waxaan leenahay dhabarkaaga la hubiyay Nimcooyinka Wanaagsan ee SEO-ga ee 2015 iyo Beyond. Sidoo kale, waxaad ku dammaanad qaadeysaa in aad kor u qaaddo booska sare ee dhammaan shuruudaha la calaamadeeyay, tusaale ahaan sawirkaaga ama sheygaaga.
Iyadoo la tixraacayo qiimaha sare, waxaa jira waxyaabo aad u badan oo aad sameyn kartid si aad u hagaajisid isku-xirnaantaada oo aad boggaaga u hesho foormaan. Dayactirida xirmooyinka jaban, xoojinta istaraatejiyada is-dhex-dhexaadinta iyo furitaanka dibad-baxa ee loo galo tabs waa hab aan caadi ahayn oo lagu bilaabi karo.
Martida kale waxay heli kartaa boggaaga internetka iyadoo loo marayo bogga bogga ama boostada. Si kastaba ha ahaatee, haddii xiriirada jabsan ay soo bandhigaan boggaaga WordPress, rajadaadu marnaba ma ogaan doonto xogta ay u baahan yihiin, sidaas darteed, waxay ku dhuftey gadaasha dhabarka. Fursada ay u sii wadaan in ay ku sii socdaan garaacida dhabarka, waxaad ku qori doontaa heerka sare ee xayiraadda oo ah go'aan sahlan.
Waxaad ka hubin kartaa boggaaga WordPress ee isku xirka jaban ee isticmaalaya moduleka, tusaale ahaan, Checker Checker. Xitaa ka sii wanaagsan, waxaad isticmaali kartaa maamulka internetka, tusaale ahaan, Checker Checker W3C. Ugu fiican waa in la dejiyo dhammaan baariikooyinkaaga jaban si toos ah barkadda si ay u joojiyaan muddada dheer ee "inta hore ay dhacdo.
Hase yeeshee, waxa la samaynayo marka xiriirku uu jebiyo wakhtiyada fiidka sababtoo ah dhaqdhaqaaq dhaqdhaqaaq ama sabab kale oo kale? Run ahaantii, taasi waa mid fudud - waxaad ka hortagi kartaa arrintan adoo samaynaya bogaga 404 caadada ah ama aad kala soocaysid isku xirnaanta jaban ee hanti la doonayay, tusaale ahaan, waxaad bogga soo bandhigaysaa ama bogga kale ee aad jeceshahay.
Halkan waxaa ah habka aad u sameysan karto bogga 404 ee WordPress iyo halkan waa qaab fudud 301 Redirects Module si ay uga caawiso ganacsiga leexinta.
Marka la eego qiyaasta soo-baxa waa qiimaha martida ee ka soo baxaya bogga qaybta, ku darista isku-xirka muuqda ee hantida gudaha waxay ku boorin karaan marti-gelin dheeraad ah inay gujiyaan bogga hore. Fursadda aad u leedahay inaad geliso blog soo jiidasho leh oo ku xiran inaad sameysid, isku xir bogagga kala duwan, dhibcaha imaanshada.
Rajada aan u diyaarsaneynin in dabka lagu furo boggaaga salaantaada ayaa laga yaabaa inay u baahato in ay baaritaan ku sameyso boggaaga. Xiriirinta hantida la xariira waxay fududeyneysaa rajada laga qabo. Marka ay socdaan, heerkaaga soo degida ayaa soo degaysa.
Xidhiidhada dibadda ee furaha cusub
Ka hor intaan la doortin ra'yiga waxa loo beddelay xaqiiqo, furitaano dibadda ah ee dariishado cusub ayaa aan lagu ansixin macaamiisha tan iyo markii ay soo gaadheen macaamilka kulan. Noqo sida ay tahay, tan iyo markii laga soo doortay, tan oo lagu soo rogay webka leh dhowr degaan oo dhan markaad furan tahay si aad u sahlan, iyo xitaa xiiso leh.
Maanta, waa inaadan ka xishoonin inaad furto meel kasta oo ka baxsan isku xirka tabarrada cusub, haddii aan iska cadahay, macaamiishaadu waxay qirayaan barnaamijyo hore oo aan xoojin tabsiyada. Sidee xidhiidhada furan ee furan ee tabsiyada cusubi waxay hoos u dhigaan qiimaha boogsiga boggaaga WordPress?
Aan kuu sheegno inaad sameysay galgalo weyn oo aad ku xiran tahay hantida ku habboon goobaha ka baxsan. Haddii ay dhacdo in isku xirnaantaas dibadda ah ay u furan yihiin daaqada / barnaamijka la midka ah, lambarrada barnaamijyada sayniska ee bixitaanka. Noqo, sida ay u dhici karto, marka aad fursad u leedahay in aad furto xiriirada dibadda ee tabaha cusub, qofka kaa soo horjeeda wuxuu heli karaa hantida dibadda iyada oo aanad ka tegin goobtaada. Inkastoo ay ku jiraan isku xirnaanta dibadda, waxaad saxdaa "Isku xirnaanta furan ee daaqad kale / tab" sanduuqa "checkbox" sida soo bandhigay sida soo socota:
Cusbooneysiis boggaaga WordPress
Halkaan waxaa ixtiraamaya: Miyaad ku dhajineysaa (oo aad la shaqeyneysaa) goob ay u muuqato sidii ardayga fasalka shanaad u shaqeynayey? Haddii ay dhacdo in goobtaada aysan ka fiicneyn celcelis ahaan celinta, ma sugi kartid in shakhsiyaadka ay ku dhajin doonaan ku filan waqti dheer si ay u iibsadaan waxa la soo bandhigayo.
Ku dhaji kheyraadka mawduuc xirfadeedka qorshaysan, tusaale ahaan, naga mid ah mid ka mid ah nooca Nuxurka Muuqaalka Waxqabadka WordPress. Sidoo kale, waxaad si fudud uga heli kartaa maadooyin qibrad leh oo ka soo jeeda WordPress.org ama iibiyeyaasha, tusaale ahaan, Mawduucyada Themeforest iyo Elegant.
Mar labaad, waxaad ka dhisi kartaa qaybtaada qaybtaada adigoo isticmaalaya boggaha horumarinta bogga ugu horreeya ee WordPress, tusaale ahaan, Composer Visual ama Beaver Builder si ay u dhahaan weli lammaane keliya. Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa maaddooyinka da 'yarta leh ee ku jira mawduucyada mawduucyada WordPress, tusaale ahaan, Bilow ama "Thesis".
Dhanka kale haddii aanad jirin wax kale oo la kala dooranayo, haddii aad haysato lacago kale oo lacag ah, waxaadna ka fakartaa inaad soo iibsato sida dukumiinti ugu sareysa WordPress si aad u hubiso waxa aad u baahan tahay (si fudud u xusuusnow tani waa marwalba doorashooyinka ugu qaalisan xishood ah inaad ogaato sida aad u codeeyn laheyd).
Iyadoo la cusbooneysiinayo boggaaga, waxaad ka fekereysaa oo ay ka mid yihiin qaar ka mid ah xaqiijinta bulshada; tirada taageerayaasha, taageerayaasha, qadimaadyada - wax kasta oo sheega macaamiisha kale shakhsiyaadkaaga ku qiimeeya. Haddii ay dhacdo inaadan haysan tirooyin cajiib ah, tixgeli inaad illowdo xaqiijinta bulshada ilaa wakhti kale oo tirooyin hooseeya ay isticmaali karaan kalsoonida macaamiisha, inkastoo xaqiiqda ah inaad si toos ah u noqoto mid toos ah.
Sii cusbooneysii boggagaaga salaantaada adoo isticmaalaya imtixaanka A / B iyo imtixaanada walaxa. Mid ka mid ah waxa aad doorbidi lahayd inaad diido inaad ka fogaato waxaa ka mid ah CTA oo leh meelo cadcad oo muuqaal ah oo ku saabsan bogagaaga salaanta. Ugu badnaan saddexda CTA waa inay noqdaan kuwo ku filan; mid deg deg ah ugu weyn, mid ka mid ah bartamaha iyo kan ugu dambeeya xagga saldhigga.
Weli marxaladdan ka mid ah ganacsiyada soo-galootiga, samee bogagga salaanta ee kooxdaada kala duwan ee dadka indha indheynaya. Ka faa'iideysiga walxaha aan caadiga ahayn iyo kuwa kale ee lagu xiro meel kasta oo ay yimaadaan si ay u galaan dad gaar ah.
Dib u noqoshada boggeeda, dhexdhexaadintu waa waddada hore, ama sida Maya Angelou (Ilaah wuxuu ku nasan karaa ruuxeeda nabadda weligeed ah) wuxuu yidhi, "Soo afjaridda horumarku waa dadaal la'aan."
Ma u baahantahay in aad sameysid meel qani ah oo qallafsan oo soo jiidan kara rajada ku jirta? Waqtigaas waxaad u baahan tahay inaad ka dhigto mid aad u adag oo si toos ah u-isticmaalka bogga shabakadda. Ku bilow inaad xakamayso qaybo aan micno lahayn oo aan taageerin ama buuxin baahidaada.
Halkaa, sii wad masaafada istaraatiijiga ah ee ka soo horjeeda jilicsanaanta iyo dhiirrigelinta. Intaa waxaa dheer, damaanad qaado xayeysiisyada aad u adeegto boggaaga WordPress waxay muhiim u tahay maaddadaada iyo takhasuskaaga. Ku dar kor u qaadista dusha sare, iyo haddii ay dhacdo in aad kartid, ka fogee fogaanta istiraatiijiga ah ee isdabajoogga iyo xayeysiinta codka.
Marka la eego dhammaan marka la sheego oo la sameeyo, balanqaado in goobtaada ay tahay mid jawaab leh si ay u tixgeliso macaamiisha macaamiisha iyo macaamiisha. Dooro mawduuc jawaabta WordPress ah (tusaale ahaan, Wadarta) laga bilaabo bilowga. Dammaanad la mid ah hababka aad dooratid waxaa loo hagaajiyaa taleefannada gacanta.
Ma u baahan tahay rajo ah inaad tagto bogga marinka? Waqtigaasi waxay u fududaaneysaa iyaga inay soo ogaadaan qadar badan oo ah walaxdaada. Waxaad ku dhejin kartaa qalabka boostada ee la xidhiidha dhammaadka giraantaada blogka ama dhinacaaga dushooda - si fudud u hubi inay cad yihiin kuwa kaa soo horjeeda. Wargelinta kicinta uma baahnid inaad sameyso iskudhaf wanaagsan, waxaa jira waxyaabo aan ku xirneyn WordPress-ku-soo-bandhigyo ah oo ku saabsan caawimaadda shaqada dhabta ah ee adag.
In kasta oo xaqiiqda ah in tani aysan si weyn u saameyn doonin qiimaha aad ujirta xayeysiintaada si aad u bilawdo, blog-ga wuxuu ka caawin karaa ka qaybgelinta macaamiisha ee culeyska dheer, kaas oo keenaya heerka qiyaastaada. Markaad hayso macaamiishaadu waxay ku dhex martay qaybta blogka, waxay shaki la'aan kugu kalsoonaan doonaan, inaad maalgashadaan tamar badan oo ku jira bloggaaga, iyo inaad siisid dadka kale.
Waxay ku saabsan tahay inaad siisid rajadaada sida wax kale oo aan kuugu jirin boggaaga - ku saabsan sidii aad u soo noqon lahayd iyo sidoo kale laga filan karo in aad ku jirto beertaada.
Marka aad isku duwo qorshahaaga rajadaada, maaddadaada iyo alaabtaada, iyo ka dib markaad isku duubto wax kasta oo kor ku xusan muraayada jannada, ma jiraan wax kaa hortaagan inaad ka yareeyso heerarkaaga boogta WordPress.
Qaado talooyinka ku qoran halkan maanta, waana in aad haysatid fiilo la wadaagayo, ama su'aasha si aad uqorto, fadlan ha ka xishoonin inaad isticmaasho aagga xusuusta hoose. Waan jeclaan laheyn inaan maqalno tixgelintaada - nala soo socodsiin!